Wikileaks, Thaileaks, Indoleaks, Pinoyleaks · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Desambra 2010 11:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, বাংলা, Italiano, Português, polski, English
Misy dikamitovy (clones) nalaina avy amin'ny Wikileaks any Azia Atsimo Atsinanana: Thaileaks ao Thailand, Indoleaks ao Indonesia ary PinoyLeaks any Philippines. Ireo vohikala ireo dia natsangana/novelomina indray tamin'ity volana ity ho fanohanana ny asa natomboky ny Wikileaks ary hamoahana ny antontan-taratasy tsiambaratelon'ny governemanta any amin'ny fireneny tsirairay avy.
Thaileaks dia ‘nanàngana tamin'ny maty ’ ny Wikileaks ao Thailand taorian'ny nanakànan'ny governemanta an'ito farany.
Noho ny antony tsy fantatra dia nobahanan'ny governemanta Thai ny fahafahana mitsidika ny vohikala Wikileaks. Midika izany fa tsy manana alàlana handray anjara amin'ny hetsika atao eo anivon'ny aterineto amin'izao fotoana ho an'ny fahalalahana ireo Thai mpampiasa aterineto sy mpiondana vohikala (webizens). Tsy azo ekena izany, na aiza na aiza eto ambonin'ny tany. Vokatr'izany no anaovanay izay fomba rehetra hahafahana misintona mivantana ireo vontoaty miresaka momba ny Thai avy amin'ny vohikala Wikileaks.
Azafady, mariho fa – ity tsy hoe faniratsiràna ny Fitondrana Thai na ny fianakavian'ny Mpanjaka. Fanaovana fanambaràna tsotra momba ny fahalalahana hahazo vaovao fotsiny ity.
thaicables dia namoaka ny antontan-taratasy avy amin'ny Wikileaks miresaka momba an'i Thailand
Miaraka amin'ny namoahana ireo telegrama manodidina ny 3000 avy amin'ny Masoivoho Amerikana ao Bangkok, izay ny ankabeazany dia nalefa teo anelanelan'ny 2005 sy ny Febroary 2010, resaka fotoana fotsiny no nandrasana talohan'ny nanakanan'ny MICT ny fidirana hitsidika ireo telegrama navoakan'ny Wikileaks.
Tsy mino izay resaka sivana isika ary mihevitra fa ny tsirairay ao Thailand dia tokony hahazo miditra amin'izay vaovao rehetra azo raisina eo anivon'ny aterineto, ka isan'ireny ny Wikileaks. Izany no antom-pisian'ity bilaogy ity.
Indoleaks dia nanomboka niasa tamin'ny 10 Desambra nandritra ny Fankalazàna ny Andro natokana ho an'ny Zon'Olombelona. Ny andàlana fototra tamin'io dia ny “Sebab informasi adalah hak asasi” adika tsotra hoe “Satria zon'olombelona ny fampahalalam-baovao.”
Roa andro taorian'ny nihodinany, ny Indoleaks dia nitatitra fa maherin'ny 100.000 sahady ireo antontan-taratasy efa vosintonin'ireo mpitsidika ny vohikala. Ary nahatratra an-tapitrisa no nitsidika azy herinandro iray taty aoriana.
Hatreto, ny efa nivoaka dia ny antontan-taratasin'ny governemanta mikasika ny famonoana ilay mafana fo Munir, ny fota-mandrevon'i Sidoarjo ary ny resaka miafina nifanaovan'ireo mpitarika Indoneziana sy ny mpitondra Amerikana mikasika ny politikan'i Indonezia momba an'i Timor Atsimo talohan'ny fananiham-bohitra tamin'ny Desambra 1975.
Uppercaise dia mibilaogy momba ny làlana nodiavin'ny Indoleaks
Miantso ny vahoaka indoneziana izy ity mba hitaky ny antontan-taratasy tena izy tsy hakàna ny hevitr'izay nandefa azy, ary haparitaka tsy asiana anarana. Nampanantena ny tsy hamoaka ny antsipirihan'ny kaonty any amin'ny banky, ny tantara na izay mombamomba ny olona manokana.
Nanoratra ihany koa momba ny tsinin'ilay vohikala izy.
Indro kelin'ny mpandrafitra, nolaroin'ny Indoleaks ny fihetseham-pony amin'ny maha-zazavao azy izy ity, miaraka amin'ny famoahana antontan-kevitra any amina vohikala mibanaka be toy ny Google Docs, ary ireo tompona vohikala mampiasa adiresy Gmail, ka mahatonga adihevitra momba ny fomba hiarovana ireo antontan-kevitra navoaka, sy ny fiarovana azo omena ny fifanakalozana tsy itononana anarana.
Amin'izao fotoana, toa tsy mbola mampiasa ireny fifanakalozana ampiasàna rindran-kajy afaka manafina ny hafatra ireny (encrypted communications) ilay vohikala na mba manome torohevira ho an'ireo mpampiasa azy mikasika ny fampiasana ny Aterineto an-katakonana na fitaovana fiarovana ny maha-izy ny tena rehefa manokatra pejy na mametraka tahirin-kevitra.
PinoyLeaks dia hanomboka hamoaka ireo ‘tete’ (Avy amin'ny mpandika: alaivo sary an-tsaina ny rano mitete avy amin'ny fantsona vaky iray) mikasika ny tranga-na kolikoly tao Philippines amin'ny 1 Febroary 2011.
PinoyLeaks dia fikambanana tsy mikatsaka tombony ara-barotra mitodika amin'ny fanabaribariana ireo kolikoly nataon'ny governemantam-paritra na ny an'ny firenena, amin'ny fandefasana ireo porofo eo amin'ny bilaogosifera (tontolon'ny fitorahana bilaogy). Manana ny fomba azo antoka sy tsy mampanahy izahay ho an'ireo mpiampanga hametraka ny vaovao amin'ny fomba tsy mitonona anarana.
Ny PinoyLeaks dia mitovitovy amin'ny Wikileaks, afa-tsy ny hoe miompana manokana amin'ny resaka kolikoly ny asany, ary Philippines no kianja filalaovany, sady ny PinoyLeaks dia miara-miasa amin'ny mpitoraka bilaogy fa tsy ny fampahalalam-baovao mahazatra (nentin-drazana). Anjaran'ireo mpitoraka bilaogy avy eo na hanely na tsia ireo vaovao momba izay ‘nitete’.
Notsindriany fa tsy misy mihitsy ifamatorany amin'ny Wikileaks
Te-hanoritsoritra izahay fa na dia mizotra amin'ny làlana nizoran'ny Wikileaks aza izahay, dia tsy misy mihitsy ifamatorana, na amin'ny endrika ofisialy io na tsia, amin'ny Wikileaks.
Miangavy anao hanampy ny PinoyLeaks hitàna ny toerany amin'ny fanovàna an'i Philippines hiala amin'ny maha-firenena ianjadian'ny kolikoly sy ny fahantràna azy ho tonga firenena maoderina.
Soratra miverina: Regional Wikileaks – Media Responses « thaicables – It's Your Right to know the Truth!
31 Desambra 2010, 02:16